तपाईं के खरिद गर्न चाहनुहुन्छ ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
माघ ३, २०७७ रेजिना पाण्डे
या त सिंगो भूगोलको ?
के–के कुराको मोलमोलाइ हुन सक्छ ?
के–के चीज बिक्री हुन सक्छ ?
यहाँ माया पनि मोलमोलाइमा बिक्छ
यो कुरा तपाईंलाई थाहा थियो ?
सुखको मोलमोलाइ छ यहाँ
आँसु थापिदिने हत्केला
पीडामा मल्हम लगाइदिने सम्बन्ध
सबै–सबै मोलमोलाइमा बिक्छन्
बजारमा भागदौड हुन्छ
प्राइस ट्याग बोकेर सहरका
सडक, गल्ली, चोकहरुमा दगुरिहिँड्ने सपनाहरु
हाँस्न पनि मोल लागेको छ यहाँ
रून पनि मोल लागेको छ यहाँ
यहाँ सबै–सबै थोक नोटमा अल्झिल्छन्
नोटसँगै चोटमा बल्झिन्छन्
लाग्छ, नोटबिना पृथ्वी नै शून्य छ
रौं–रौंमा बिकेका छन्
पुजारीलाई देवता बेच्नु छ
मानिसलाई चेतना बेच्नु छ
मलामीलाई लास बेच्नु छ
वेश्यालाई शरीर बेच्नु छ
यो नोटको बजारमा सबथोकलाई सब बेच्नु छ
तपाईं के खरिद गर्न गर्न चाहनुहुन्छ ?
प्रकाशित : माघ ३, २०७७ १२:५६
माघ ३, २०७७ रामदयाल राकेश
'प्रवास' सुमित शर्मा समीरको पहिलो उपन्यास हो । किताब ‘म’ शैलीमा लेखिएको छ । किताबको प्रारम्भमा उपन्यासकारलाई एउटा उद्बोधनले जीवनपर्यन्त लखेटिरहेको छ, ‘उठ अली, तिमी जीवनपर्यन्त निदाएका छौ । अब उठ ।’ उपन्यास पाँच अध्यायमा विभाजित छ ।
पहिलो अध्याय ‘खोज’ मा उपन्यासकारले आफूभित्र अलीलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरिसकेका छन् । अली बाल्यकालदेखि नै प्रताडित छन् । सानै उमेरमा आमा गुमाएका अली आफ्ना नातेदार र साथीहरूको पनि तिरस्कार झेल्छन् ।
अनाथजस्तो जीवन आरम्भ गरेको अली परिस्थितिको झापड खाँदाखाँदा बलियो बन्छ । अस्थिर पनि हुँदै गएकाले ऊ विभाजित मानसिकतामा बाँच्न बाध्य हुन्छ । यस्तै स्थितिमा उसले जारासँग विवाह पनि गरिसकेको हुन्छ । तर, उसको वैवाहिक जीवन पनि दुःखद सचित्रण गरिएको छ ।
दोस्रो अध्यायमा अलीकी छोरी पनि जन्मिसकेकी छन्– आयशा । तर, परिवारको आर्थिक स्थिति सन्तुष्टिजनक नभएकाले श्रीमान्–श्रीमतीबीच अहोरात्र किचकिच हुनु स्वाभाविकजस्तो भइसकेको छ । यही कारण ऊ बिदेसिन पुग्छ । तर, त्यहाँ पनि ऊ खुसी रहन सक्दैन । अली र उनका मित्र आहिलबीचको संवाद यो अध्यायको मूल केन्द्रमा अवस्थित छ, जहाँ उनीहरूले पाकिस्तानी र क्यानिडियन समाजबीचको तुलना गरेका छन् । यही अध्यायमा अलीका मित्र आहिल र उनका छोरा बावेरबीचको मतभिन्नता दर्साएर लेखकले प्रवासमा गएर बस्ने परिवारहरूमा अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ताबीचको मतान्तरलाई सजीव चित्रण गरेका छन् ।
तेस्रो अध्यायमा उपन्यासको प्रमुख पात्र अली र भारतीय मूलकी रियाबीच भेट हुन्छ । र, उनीहरू प्रेममा पर्छन् । त्यसपछि सम्पूर्ण सामाजिक बन्धन तोडेर उनीहरूले एकअर्कालाई सम्पुन्छन् । यस समर्पणमा न कुनै जातपातको कुरा छ, न कुनै धर्मको, न कुनै श्लील–अश्लीलकै कुरा छ । बरु यो समर्पणमा दैहिक तृष्णा र शारीरिक आवश्यकता तथा जैविक प्रक्रियाको परिपूर्ति छ ।
रिया भारतमा आफ्ना श्रीमान् र छोरीलाई छोडेर क्यानडा आएकी हुन्छिन् । अलीसँगको सम्बन्धमा असमञ्जसमा परेकी रियाले अलीलाई सोध्छिन्, ‘दुईखाले जीवन कसरी बाँच्न सकिन्छ ?’ अली जारालाई भन्छन्, ‘यस धर्तीमा सबैले दुवैखाले जीवन बाँचेका छन् । एउटा जीवन शरीरबाट सञ्चालित छ । अर्को आत्माबाट । एउटा बुद्धिबाट सञ्चालित छ । अर्को विवेकबाट । एउटा मनबाट सञ्चालित छ । अर्को चतनाबाट ।’
चौथो अध्याय विछोडको हो । यस अध्यायमा अलीको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई रियाले प्रतिलक्षित गरिसकेकी थिइन् । उसले दोस्रो भेटमा स्पष्ट भनिन्, ‘तिमी त्यो अली रहेनौ, जसलाई मैले प्रेम गरेकी थिएँ ।’ अलीलाई नरमाइलो लागेको थियो । तर, दुवैको विछोड भयो । अलीले पाकिस्तान फर्किने निधो गरिसकेको हुन्छ । अन्तिमपटक रियालाई भेट्दै ऊ भन्छ ः ‘तिमी मेरो जीवनको अत्यन्त सुन्दर पाटो रहनेछौ रिया । तिमी मात्रै हौ, जो मसँग मेरो मृत्युशय्यामा सँगै जानेछौ ।’
अली पाकिस्तान पुग्छन् । दुर्भाग्य, उनकी पत्नी जारा र छोरी उनीसँग केही समय बिताएपश्चात् अर्का पात्र सबिरसँग अमेरिका प्रस्थान गर्छन् । यही अध्यायमा अलीकी श्रीमती जाराको प्रेम पाटो उजागर हुन्छ । अन्तिम अध्यायमा छोरी आयशाको विवाह सम्पन्न गर्न जाराको निम्तोमा अली अमेरिका पुग्छ । यस अध्यायमा अलीले जारासँग क्यानाडामा रियासँगको सम्बन्ध खुलस्त पार्छन् भने जाराले अलीलाई छोडेर गम्भीर त्रुटि भएको स्विकार्छिन् ।
उपन्यासको कथावस्तु पाकिस्तानको लाहोर र क्यानाडाको टोरेन्टोमा सीमित भए पनि यसमा पाकिस्तानको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थितिको स्पष्ट चित्रण गरिएको छ । त्यस्तै क्यानाडाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको पनि सचित्र वर्णन छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७७ १२:५५